Malunga nathi - iZhuji Shengpai Packaging Material Co, Ltd.
Zhuji ShengPai Packaging Materials Co., Ltd. yasekwa ngo-2010, ikomkhulu lethu elibhalisiweyo $ 2, 000, 000; setha "uphuhliso, uyilo, imveliso kunye nokuthengisa" njengenye yeenkampani zokushicilela ezishushu zokunyathela inkampani. Inkampani igubungela indawo ye-15 eehektare ezingama-28, 000 zeemitha zesikwere kunye ne-13 yezixhobo zangoku zokuprinta izixhobo zangoku zokushicilela iiseti ezili-10, ezahlukeneyo ngokubanzi, ngokubanzi Isetyenziselwa ukuthuthwa kwesakhelo seplastiki se-PS, ukuhanjiswa kwe-substrate, ukuhanjiswa kwekona ye-PVC kunye namanye amasimi. Besisoloko siphuhlisa iifilimu zokushicilela ezinexabiso eliphezulu kubathengi ngombono wophuculo kunye nophuhliso, kwaye zamkelwe kakuhle ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Sibamkela abathengi ngokufudumeleyo kuzo zonke iinkalo zobomi ukutyelela umzi-mveliso wethu kwaye sisebenzisane ukwenza ikamva eliqaqambileyo.
Ukuba ungathanda ukuzama ukunxibelelana nathi, mhlawumbi siza kwenza inzuzo kunye kwaye sabelane ngezixhobo zethu omnye komnye.
Izixhobo ezinkulu zala maxesha ezityalo eziphucukileyo liqela lobuchwephesha elibalaseleyo lenza inqanaba lokuvelisa kweshishini lihlale lihlala phambili kumzi mveliso, amandla okwenza imveliso ukuqinisekisa ukuba ishishini liphendula kwangexesha kwaye lihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zokwandiswa; Iindlela zolawulo lwezenzululwazi kunye namava atyebileyo okuvelisa aqinisa ngakumbi indawo yethu ekhokelayo kwicandelo lokuvelisa eliphambili!
Senza ikakhulu i-SPC / WPC / LVT ifoyile yomgangatho, i-PVC yodonga olushushu lokunyathela, ifoyile ye-UV, ifoyile ye-MDF, kwaye sijolise kuThuthi lwesakhelo seplastiki ye-foam, ezothutho ze-substrate, ukuhanjiswa kwenkxaso ye-PVC. Sinemigca yokuvelisa evuthiweyo kunye namagcisa kwaye besiphuhlisa iifilimu zokushicilela ezinexabiso eliphezulu kubathengi ngombono wophuculo kunye nophuhliso, sinokuhlangabezana nomnqweno wakho njengoko ufuna. Sibamkele ngokufudumeleyo abathengi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuya.